Cyclops kukhona emndenini copepods. Kufakwa isigaba shellfish, Cyclops has a isakhiwo umzimba esiyingqayizivele sihluke kakhulu lonke abameleli bakhe. Ngokumangalisayo, naphezu kokuba lingakanani encane, lezi ezinamagobolondo hhayi kuphela ngukudla izinhlanzi eziningi, kodwa futhi ungadla izinhlanzi ngokwabo, kuze kube yilapho isikhathi sikhule.
Eqinisweni, Cyclops libhekisela ezinamagobolondo, plankton ngabanye, okungase litholakala cishe kuyo yonke Echibini angenasawoti. Is they luwumthombo oyinhloko ukudla inhlanzi kakhulu futhi gazinga.
Ngesikhathi esifanayo, bona bangadla ezihlukahlukene ezincane, ukuze amanzi njalo sigcinwe isimo ihlanzekile. Ngaphezu kwalokho, sibonga imisebenzi ukudla Cyclops akutholayo elikhulu ukucaciswa nokwenziwa ngcono izimfanelo zayo zemvelo.
Ngokuvamile zonke copepods ngenxa ukufana sangaphandle ngokuthi Cyclops, kodwa isitatimende okungalungile, ngoba ukubukeka ngamunye Cyclops crustacean uhlukile. Lapho bebaningi abantu ngobukhulu, ngaphandle ezingavamile, musa idlule 4.5 mm. Ngokwesilinganiso, oFakazi ngokunika ummeleli usayizi standard kusuka 0.5 kuya 2 mm. Zonke Cyclops zingahlukaniswa zibe eyeduna neyensikazi a izici ngokobulili evelele. Cyclops - ezinamagobolondo, umbala okuyinto incike ukudla badla ukudla, which they zilawule ingxenye sombala Umbala, kodwa ngokuvamile yilezi:
Naphezu kobungako nobuningi bayo, iningi Cyclopes kukhona yokuphila okuzingela. Ngesikhathi esifanayo okuzingela, zivame kakhulu ezisetshenziswa amasu okungazelelwe, gxuma esheshayo isisulu abangaqaphile. Ngesikhathi lapho abazingela yisiphi isizathu kungenzeki, bedla lwasolwandle ezahlukene.
Ezinamagobolondo Cyclops esingokwemvelo unyaka wonke olwenzeka endaweni amadamu. Ngenxa yalokho, baba nomthelela ukuphila komuntu ngezinga elikhulu, hhayi kuphela okwandisa labantu izinhlanzi, kodwa futhi bathelela abantu ngokusebenzisa izimpethu wakhe yisinanakazana ahlukahlukene. Eqinisweni Daphnia, efana Cyclops - ezinamagobolondo, ogama isakhiwo kuyahluka kakhulu kusuka abanye abantu kakhulu okuqondene nabo ekilasini efanayo, futhi iyiphi isakhiwo eziyingqayizivele umzimba, kodwa ikhanda balolonge Cyclops iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho. Itholakala:
Omunye iso - wakhonza njengombonisi isizathu esiyinhloko iqiniso lokuthi copepod uye wathola igama layo yesibili - Cyclops.
Amabili namabhuzu antenna.
izinyawo eziningana imihlathi.
Kulokhu, omunye pair of antenna kuyinto athuthukile uncono kakhulu futhi mude kakhulu kunamanye. Kwaba ngenxa Cyclops wakhe eba ijubane edingekayo, kodwa ingasetshenziswa esengeziwe imisebenzi ehlukile. Ngokwesibonelo, owesilisa nabo kungaba ubambe owesifazane ngesikhathi kokuzalela.
Zonke Cyclops umzimba ahlahlelwe zibe izingxenye ahlukene, ne esifundeni sternum wathola abahlanu babo ngesikhathi esisodwa. Ngaphezu kwalokho, exhunywe ibele lakhe nemilenze ngezingubo bristles ekhethekile ezisiza abantu ukwenza ukubhukuda iminyakazo. Esiswini wathola 4 izingxenye futhi amagatsha ekhethekile ekupheleni.
Ukuze ukwazi ukubona bobulili we Cyclops crustacean, ngokwanele nje ukubamba umuntu ulubheke ngokusebenzisa khulu. Uma uthola ekupheleni isikhwama esincane umzimba ke phambi kwakho nowesifazane, kepha uma kungengakho ukuzithandela - iduna. Lezi zilwanyana ezinomzimba omalungalunga nokuzala fast kakhulu, ngenxa lokho kungase ngokushesha yokuhluleka kudume ichibi, nakho hit. Ngenxa yalesi ukusinda kahle sibaningi ngisho nasezimpahleni noma amathange yokugcina, Cyclops.
Ezinamagobolondo, dilution okuyinto kungenzeka ekhaya futhi akunzima ikakhulukazi, wabanjwa usebenzisa net ezenziwe ngendwangu mncane futhi eqinile. Kunobe ngabe ngusiphi simo, ukubamba lokhu crustacean encane behluleka. Kuyoba nje agxumele umgodi amanzi agelezayo. Okulandelayo udinga ukusebenzisa abantu abambalwa esitsheni yamanzi.
Nauplii - ngakho isibungu, elisuselwa Cyclops. Shellfish, okuyinto ukukhiqizwa kabusha wenziwa inqwaba ngokwanele zivela ngasesinqeni se esiswini nabesifazane, elilodwa noma ngaphezulu amaqanda amasaka. Of amaqanda babeka esikhathini esizayo futhi eza bakheké ngokuphelele izibungu. Kuyaphawuleka ukuthi imibono yayo ngokuphelele ezahlukene kusukela kumuntu omdala, agcwele.
Ezimweni zemvelo izinhlanzi nzima ukubamba Cyclops noma isibungu we ukuhamba kakhulu. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi cabangela iphuzu elilodwa. Uma ezinamagobolondo Cyclops esetshenziselwa ukusuthisa izinhlanzi isilwane, kufanele baphonse in aquarium abambalwa kakhulu abantu, ngoba uma izinhlanzi awunaso isikhathi ukuba adle nabo ngendlela esifike ngesikhathi, ezinamagobolondo luyokhula ngokushesha ngaphakathi aquarium uyomane udle wonke gazinga.
Ngokuvamile, ezinamagobolondo Cyclops (Cyclops) kanye nezihlobo zabo abaseduze diaptomids (Diaptomus) ingatholakala ogwini amachibi nemifula. Ngenxa esinothi enamandla, bacasulwa esusela amanzi uqobo, futhi kusuka phansi futhi wenze kuzuba, badinga ukuhambisa. Ngakho uliphathise gxuma kungenzeka kunoma yiluphi uhlangothi wayefisa Cyclops kanye okuthiwa i-amabanga sasivumela eside ngenxa yobukhulu bawo amancane.
Ezinamagobolondo Cyclops angayinqoba ibanga 75 mm lonke yesibili owodwa. Ukuze uqhathanise, Cyclops ishesha izikhathi ezingaphezu kuka-25 aphinde abhukude abuyele ibanga by ngwenya ngesivinini ophansi.
zinhlobo ehlukile ezinamagobolondo Calanus kungatholakala ngisho amanzi olwandle okunosawoti. Libuye libe kuyingxenye eyisisekelo plankton futhi kungukudla ezingabizi kakhulu izinhlanzi eziningi.
Lezi eyisinambuzane ingasetshenziswa ngempumelelo njengoba ukudla bukhoma noma eqandisiwe ngoba inhlanzi aquarium, babanike zonke izakhamzimba ezidingekayo. Kumele kukhunjulwe ukuthi ekilasini ezinamagobolondo Cyclops (Copepoda) kuhlanganisa imikhaya eminingana.
Ezinamagobolondo Cyclops kahle nezimo ezishintshashintshayo sezulu. Kuleso simo, uma iqina echibini noma bome lapho komile, Cyclops secrete isakhi esithile esikhethekile futhi lisibekele ngokuphelele kubo isidumbu sakhe. Ngalesi sikhathi base zibukeke zifane umfece walo isakhiwo eligcina yonke izinqubo ezidingekayo ukuze kube nokuphila, ngisho okokuqandisa eqhweni. Ezimweni ezingandile, Cyclops crustacean ukugcina umfece iminyaka eminingi, kodwa ngokuvamile isikhathi eside enjalo ayidingekile. Yingakho kubo inqwaba ingatholakala amaxhaphozi ka encibilika iqhwa.
Esinye isici esiyingqayizivele yalezi copepods ukumelana imvelo, okuyinto okungekuhle kakhulu ezinye izilwane. Njengoba isibonelo, ezifana Cyclops ezihlukahlukene njengoba Cyclops strenuus, okuyinto angaphila isikhathi esithile ngisho emanzini, lapho-hydrogen sulfide likhona. Abanye izinhlobo ibekezelelwe kahle amagesi asidi noma nezinye izinto ezingezinhle zokusebenza ezivamile.
Zmeegolovnika baseMoldova: incazelo izitshalo kanye nokusetshenziswa
Izingcaphuno Hegel sika zefilosofi
Maria Arbatov: Biography emfushane
Kungani iphupho amakhowe?